Abaalmarinada Muusikada NRJ 2019: jaakada aadka loo xusay (oo aad qaaliga u ah) ee Matt Pokora oo ku yaal rooga gaduudan - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE Abaalmarinada Muusikada NRJ 2019: jaakad aad loo ogeysiinayo (oo aad qaali u ah) Matt Pokora oo saaran roog cas
Mr. Pokora ayaa ka hadlaya isaga. Hadana, maahan heesihii xiddiggu laakiin waa kooxdiisii ​​la hadlay. Isaga oo ka soo muuqday xafladdii abaalmarinta Muusikada ee 2019 NRJ ee Cannes, heesaha ayaa sii daayay ciyaarta weyn oo u muuqday koox mustaqbal wanaagsan leh. Runtii, M. Pokora soo hor dhigay sawir qaadayaasha, saaxiibkiis Christina Milian dhinaca gacanta, shaati cad oo hoos gashan jaakad madow oo daah furan. Moodeel saxeexan ah ee guriga Dior, sida ku qoran hore.
Jaakad khaas ah maxaa yeelay ... wali lama heli karo suuqgeynta!M. Pokora sidaas ayaa loo sii fiiriyay. Goobta guriga Dior, qof ayaa aqrin kara oo kaliya (daqiiqad): Koofiyadda milatariga milatariga ee grey farshaxan oo leh faahfaahin CD-ga dhejiska ah iyo sharooto dhejis ah oo xirma Dior ". Qiimeheeda? Waxaa lagu dhawaaqay 2450 euro ...
Habeenkaas, M. Pokoramar kale ka falceliyey mustaqbalkiisa aabihiis, mahadsanid hooyada cunugeeda mustaqbalka Christina Milian markii uu qaadayay abaalmarintiisii ​​Francophone Male Artist of the Year masraxa. Abaalmarintan waxaan u hibeeyay saaxiibkay kaas oo filanaya dhacdo farxad leh, iyo gabadha ay soddohda u tahay. Taasi waa adiga. Waan ku jeclahay ”, sidaa darteed xiddigtu khudbadiisii ​​ayuu kusoo gabagabeeyey. Safarka buuxa ee Dalxiiska Pyramid, M. Pokora mar dambe uma safro waddooyinka Faransiiska kaligood. Erayadii ku dhajiyay qalbiga quruxdeeda ...
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.closermag.fr/people/nrj-music-awards-2019-le-gilet-tres-remarque-et-tres-couteux-de-matt-pokora-sur-1047261